Nezvedu - Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd.
Fujian AoBoZi Technology Co, Ltd.
Yakagadzwa muna 2005 muFujian, China, Kambani yedu ndeye yepamusoro-tech kambani inoshanda muR & D, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi inoenderana yekudhinda zvinoshandiswa. isu tiri wekutanga kugadzira uye nyanzvi mutungamiri mumunda weEpson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Mukoma, uye nezvimwe zvakakurumbira mhando mune dzakasiyana siyana.
➢ Inkjet Printer Ink senge sublimation inki, pigment ink, dhayi inki, dtg inki, uv inki, eco solvent inki, solvent ink nezvimwe;
➢ Ukuru hwakasiyana hweEpson inkjet printer, kunge A3 A4 saizi, 61cm uye 111cm kudhinda saizi
➢ Indelible Election Ink (sirivheri nitrate yesarudzo inki) uye isingadzimiki chiratidzo iyo yakashandiswa kuParamende kana Mutungamiri Kuvhota muAfrica neAsia nyika dzine mhando yakanaka uye mutengo ndicho chinangwa chedu chikuru;
➢ Peni Ink yakaita chena bhodhi peni inki, tsime peni inki, dip pen ink seti, doro inki iyo yaishandiswa kune ese marudzi epeni zadza;
➢ TIJ2.5 Coding uye Kuisa mucherechedzo senge yekunyora coding, mvura uye solvent inki, mvura yakavakirwa uye solvent yakavakirwa inki cartridge iyo yaishandiswa kubarcode kudhinda;
Mushure mezvose, hatisi kungopa inki, asi kukudziridza mhinduro dzakagadziriswa dzinoenderana zvese zvaunoda uye neizvo zvevatengi vako uye zvinopa yakazara sevhisi yeOEM nechiratidzo chedu chemisika yekunze neyekunze. Simba redu rekuvandudza riri mukuvandudzwa kwekudhinda inki yemhinduro dzekudhinda, pamwe nemuzvigadzirwa, matekinoroji uye mashandisiro. Izvi zvinoreva kuti zvigadzirwa zvichangogadzirwa zvinogona kuiswa pamusika nekukasira.
Isu tinogara tichivandudza uye tichiteerera kunyangwe mushure mechikamu chekusimudzira. Yedu yakasarudzika uye inochinja modular system inotibvumidza kuzadzisa zvese zvako wega zvishuwo. Isu tinoteedzera pane izvi nekutsigira iwe pane saiti kugadzirisa maitiro ako uye kuvimbisa kutendeseka uye nekukurumidza kuendesa kuburikidza neanoshanda anoshanda logistics network.
Vashandi vakazvipira zvakanyanya vanopihwa iwe chete vanokutsigira pamatanho ese eprojekiti uye uve nechokwadi chekuti mibvunzo yako ichapindurwa nekukasira uye zvishuwo zvako zvinoiswa zvakananga muchiito. Obooc ine yakazara package yematanho mhinduro inoita mutsauko uye tsvaga zvimwe pamusoro perudzi rwemari inobhadhara uye ese-anosanganisira mhinduro ichaita kuti ubudirire.
Vashandi vedu vanokubatsira pane zvese zvaunoda. Isu hatizvione isu seyakareruka inki inogadzira asi vako vakavimbika shamwari. Izvi zvinosanganisira kuburitsa inki dzemhando yepamusoro uye kuronga kuendesa kwavo kwauri pamwe nekupa rutsigiro rwehunyanzvi rwakagadzirwa. Isu tinopa mhinduro dzakapfuma kwazvo mukati mekosheni yako yese yakakosha.
1. Se ISO9001 uye ISO14001 yakasimbiswa mugadziri, yedu inki kugadzikana ndiyo yakanakisa muChina, inozivikanwa nevatengi nevakwikwidzi muChina.
2. Kutengesa vhoriyamu kunoiswa.
3. Hurumende yePhilippines inotisarudza semumwe wevanopa inki.
4. Tinogona kugamuchira bhizinesi reinki reOEM.
5. Isu tiri vatengesi ingi vakavimbika veTaiwan cartridge vagadziri.
Yedu chigadzirwa mutsara
1. Bulk inki
2. Zadzai ingi neki inki
3. CISS uye CISS zvishongedzo
4. Inoenderana macartridge
5. Iyo seti yakazara ye thermal printa uye yavo accessories
6.Iingi yakakosha, senge isingadzimiki inki
Tinotarisira kugadzira ramangwana rakanaka newe.